Unokukhetha njani ukunqoba amazwi angundoqo e-Amazon?
Into enokuthi kukho ininzi ye-Amazon niches - kwaye bonke bayasondeza. Kodwa ukuba ufuna ukwenza iinjongo zangempela ngaphandle, kuya kufuneka usebenze uphando olusisiseko lwegama eliphambili, ngokuhambelana nokuqinisekiswa kwe-niche echanekileyo okufunekayo ukufumanisa kuphela amagama angundoqo okuphumelela kwi-Amazon. Kungenxa yoko kuya kufuneka ukwazi ukuba ungayifumana njani indlela enqabileyo kunye neyinqabileyo yegolide ebonwa khona. Qaphela, ukuba uqinisekise ukuba amagama akho angundoqo asebenzayo aphezulu angakwazi ukuwina, uya kufuneka ugxininise ngokukodwa kwiintlobo ze-ecommerce kunye neentlobo zemveliso ezinokuchazwa ngokucacileyo njengenzuzo ngokupheleleyo. Khumbula, kubaluleke kakhulu ukuba ube nenqaku elifanelekileyo lokuqala naluphi na, uhambo oluthembekileyo lokuthengisa, ukuzibona phakathi kweenkampani ezikhokelayo kunye neempumelelo zokuthutha ezise-Amazon.
Yintoni eyenza inqaku leNiche elibalulekileyo kwi-Amazon?
Lona nje u-non-brainer, kodwa mhlawumbi nantoni na eyokuzisa imali ingabizwa ngokuba yinzuzo, kunene? Kwaye kwimbono ye-Amazon, loo nkcazo ecacileyo nelula kakhulu kufuneka ihlaziywe nje ngesinye isimo - ukufumana indawo enenzuzo kakhulu kwi-Amazon kuthetha ukuba kulindeleke ukuba ivelise isabelo seengonyama seenzuzo ezipheleleyo ozilindeleyo ngaphandle kwexesha - elifutshane kwenzeka.
Ingaba i-target yakho ye-target yona iyinzuzo?
njani ukuqonda ukuba sele ukhona kwindawo elungileyo ukuze uqhubeke uhlola amagama akho angundoqo e-Amazon? Enyanisweni, awukwazi nje ukubiza ukuba i-niche ibonakale inenzuzo, xa iziphumo zakho zisekelwe, umzekelo, kuphela kwimilinganiselo yosesho ekholisayo, kunye nesibonelelo esithe tye semveliso efumanekayo ngaphezu kwee-bucks eziliwaka. Oku akusayi kuze kube yinto efanelekileyo kuba uya kufuneka ufumane ubuncinci bala manqaku (ukuba awunabo bonke) axhunyiwe kakuhle ngaphandle kokuba ufuna ukuchitha ixesha lakho nomzamo. Yiyo leyo. Ngoko, xa ukhangela amagama angundoqo e-Amazon, ungcono ukuqwalasela uluhlu olulandelayo lwenqaku . Ukuze uthole amathuba aphezulu okufumana ukufumana inzuzo yamagama angundoqo kwi-Amazon, qiniseka ukuba uyayenza kwindawo efanelekileyo.
Ngokufanelekileyo, usebenzo jikelele lwe-niche kufuneka udibanise kunye nale mibandela:
Ngokukhawuleza ukuphuhlisa umgangatho ophakamileyo ekukhuleni umthamo wokusesha.
Ukuncintisana kwamanqanaba angaphezulu okanye angaphantsi kwe-Google.
UMveliso ufumaneka kwiimali ezinkulu.
Kukho ukuhlaziywa kwabathengi abaninzi abonelelwe kwento nganye enikezelwe khona.
Konke kuzo zonke, amathegi exabiso elaneleyo kufuneka abe ngaphezulu.
Ubomi obungapheliyo bemihla yobomi ngaphandle kokugcinwa ngokuqinileyo okanye imisebenzi efunekayo.
Inani elaneleyo lomthengi amagama angundoqo anokunika indawo ekhululekile yokuhamba.